Ny fiainana serivisy amin'ny peratra famehezana-CIXI DONGFENG SEALING&PACKING Co., Ltd
Ny fiainana fanompoana ny peratra famehezana
Fotoana: 2021-12-24 Hits: 4
Betsaka ny fifandraisana misy fiantraikany amin'ny tombo-kase, toy ny hery tsy mitovy, ary ny fanerena maharitra. Araka ny fomba fametrahana ny peratra famehezana, ny fametrahana ny fomba isan-karazany toy ny fisaka concave-convex grooves dia
samihafa, izay mety hiteraka hery tsy mitovy sy fivilian-dava ny ivon-kery.
Raha mavesatra ny ilany iray ary maivana ny ilany, dia ny fiovaovan'ny compression maharitra vokatry ny fihemorana maharitra amin'ny hery, izay tena matotra kokoa. Rehefa nesorina indray ny peratra famehezana dia mety ho simba ilay izy. Rahoviana
fametrahana ny peratra famehezana, dia ilaina ny mifehy ny fifandanjana sy ny fanamiana fampidirana ny hery.
Misy antony maro ihany koa: ny vokatra silicone sasany dia manana fiainana serivisy samihafa araka ny tontolo iainana ivelany sy ny fananana, ny fanerena miasa, sns.; Ny iray hafa dia ny hoe araka ny faharetan'ny fitaovana,
misy antony maro mety hahatonga ny famehezana. Mihakely ny fiainan'ny faribolana.
Next: Fitaovana mahazatra sy ny sahan'ny fampiharana ny O-peratra